Ny momba ny jaundice amin'ny saka | Noti saka
Raha miara-miaina amin'ny saka tianao ianao dia ho tianao ny ho salama foana, fa ny zava-misy dia amin'ny maha-zavamananaina azy, mandritra ny fiainany dia mety harary mihoatra ny indray mandeha izy. Na dia misy aretina lehibe kokoa aza noho ny hafa, raha iray amin'ireo soritr'aretiny dia jaundice dia tsy maintsy miahiahy bebe kokoa ianao raha azo atao.
Noho izany, Hanazava ny zava-drehetra momba ny jaundice amin'ny saka izahay: ny antony, ny soritr'aretina ary maro hafa. Voalohany, holazainay aminao ny atao hoe bilirubin, amin'ity fomba ity dia azonao atao ny mahatakatra tsara kokoa izay rehetra hazavainay avy eo.
1 Inona no atao hoe bilirubin?
2 Fa maninona no miseho ny jaundice amin'ny saka?
2.1 Fambara ny jaundice amin'ny saka
3 Inona no atao hoe jaundice?
4.1 Jaundice Hepatic
4.2 Jaundice Posthepatic
4.3 Jaundice tsy aretin'aty
5 Ahoana no anaovanao ny diagnostika?
6 Inona no fitsaboana?
Inona no atao hoe bilirubin?
Bilirubin dia vokatra miforona rehefa simba ny eirotrocytes (sela mena mena) amin'ny faran'ny tsingerin'ny fiainany (izay 100 andro) ary potehina ao amin'ny tsoka sy taolam-paty. Manomboka amin'ny fananana ny lokony mena miloko mankamin'ny mavo, ary rehefa tonga bilirruibin ilay izy.
Izy io dia dingana sarotra iray izay ahovan'ny hemoglobinina ho lasa biliverdin ary avy eo lasa bilirubin mety levona. Navoaka ho any amin'ny lalan-drà io ary mandeha amin'ny atiny miaraka amin'ny proteinina.
Rehefa mahatratra ny atiny izy dia avadika ho bilirubin mifangaro ary mivangongo ao anaty gallbladder.. Isaky ny mivoaka ao anaty tsinay kely ny gallbladder dia misy bilirubin kely mivoaka miaraka amin'ny bile sy bakteria. Izy io dia navadika ho pigment ara-dalàna: stercobilin (izay manome loko ny volontany) sy urobilinogen (izay manome ny urine ny lokony mavo).
Fa maninona no miseho ny jaundice amin'ny saka?
Araka ny nahafahanao nahatsapa avy tamin'ilay nolazaina tamin'ny teboka teo aloha, ny asan'ny atiny dia manan-danja amin'ny fizotrany rehetra. Hiseho ao anaty saka ny jaundice rehefa tsy afaka mamoaka bilirubin ny vatany ary singa hafa amin'ny bile.
Fambara ny jaundice amin'ny saka
Ny Jaundice mihitsy dia efa fambara izay manondro fa manana olana ara-pahasalamana ny saka. Na dia tsara aza ny manamarika fa ny famantarana mazava indrindra an'io aretina io dia ny loko mavo.
Este mavo ny hoditra Hita eo amin'ny vava, sofina ary amin'ny faritra tsy misy volom-borona ary hita ny hoditry ny saka.
Inona no atao hoe jaundice?
Ny jaundice dia ny loko mavo amin'ny hoditra, ny urine, ny serum ary ny taova noho ny fanangonana ny pigment izay fantatra amin'ny hoe bilirubin ao anaty ra na sela.. Niforona ny bilirubin rehefa tonga amin'ny faran'ny fiainany ny sela mena izay maharitra 100 andro. Ireo sela ra ireo dia potehina ao amin'ny tsiranoka sy ny tsokan-taolana, ary ny bilirubin dia miforona avy amin'ny hemoglobin, izay ny loko manome loko azy ireo. Navoaka tamin'ny fivezivezena izy ary nankany amin'ny atiny niaraka tamin'ny proteinina.
Ao amin'ny atiny dia novaina ho lasa bilirubin mifangaro izy io ary tehirizina ao anaty gallbladder. Isaky ny esorina ao anaty tsinay kely ny gallbladder dia misy bilirubin kely mivoaka miaraka amin'ireo singa ao amin'ny bile. Ary farany, ary aorian'ny fiasan'ny bakteria maro dia avadika ho loko hafa izy: stercobilin (ny lokon'ny diky) sy urobilinogen (an'ny fisotrony).
Rehefa mitranga dia satria misy zavatra tsy mety ao amin'ny aty; tsy afaka manatanteraka ny iraka ampanaovina azy ary tsy afaka manala ny bilirubin miditra. Ny sela aty (hépatite) dia mamoaka io pigment io any amin'ny canaliculi bile. izay mihazakazaka amin'ny tambajotra sela, izay mankany amin'ny gallbladder.
Etsy andaniny, rehefa misy toetran'ny pathological ny sela na mirehitra ary tsy afaka mivoaka any amin'ny tamba-jotra ny bilirubin, dia io no mitranga ny cholestasis intrahepatic.
Noho izany dia mitranga izany rehefa ny aty tsy afaka mamoaka bilirubin. Ny antony mahazatra indrindra dia:
Mitranga izany rehefa manangona ivelan'ny aty ny bilirubin noho ny sakana. Ny antony mahazatra indrindra dia:
Neoplasma ao amin'ny duodenum sy pancreas
Vaky ny lalan-dra
Jaundice tsy aretin'aty
Mitranga izany rehefa bilirubin be loatra no vokarina ka tsy afaka mamoaka ny loko ny aty vokatry ny fahasimban'ny sela mena. Ny antony dia:
Aretina virosy na bakteria
Ahoana no anaovanao ny diagnostika?
Raha miahiahy ianao fa voan'ny jaundice ny saka tsy maintsy entinao avy hatrany any amin'ny mpitsabo biby izy. Rehefa tonga any dia hanana fanadinana ara-batana sy andiana fitsapana maromaro ianao, toy ny fitsapana ra na fitarafana. Ho fanampin'izany, miaraka amin'ny tantaram-pitsaboana, ianao dia ho afaka hahafantatra izay antony.
Ao amin'ny saka manana jaundice mora ny mahita anzima aty ambonyna dia tsy manondro aretina hepatobiliary voalohany na faharoa aza izany. Orientation fotsiny io fa ilaina ny fandinihana ultrasound sy radiologie foana.
Na dia talohan'ity aza, ny tantara ara-pitsaboana sy ny fanadinana ifotony dia ahafahan'ny mpitsabo biby mahita nodulo tiroida, ranoka ao amin'ny kibony (cystitis) ary fantaro ihany koa raha manana karazana fihenan'ny fanafody hepatotoxika ianao.
Amin'izany heviny izany, ny jaundice dia takatra ho soritr'aretina vokatry ny fanovana ary izany no antony hahitana raha tena misy izany dia ilaina ny manao fitsapana mandreraka.
Inona no fitsaboana?
Ny fitsaboana dia hiankina be dia be amin'ny antony, izay amin'ny fiheverana fa misy aretina maro izay mampiseho ny jaundice ho soritr'aretina mety ho zavatra rehetra manomboka amin'ny fihinanana antibiotika ka hatramin'ny fiovan'ny sakafo. Ny tsy vitanao mihitsy dia ny manadin-tena raha tsy manontany ny mpitsabo anao aloha, satria mety hahafaty izany raha tsy izany.
Manantena izahay fa nahita azy io mahasoa. Amin'izany no ahafahanao manana ny fiheverana raha mijaly amin'ity saka ity ny saka ary, raha izany, ny mpitsabo biby dia afaka manadihady azy faran'izay haingana mba hahitana ny fitsaboana sahaza indrindra amin'ny tranga manokana.
Na izany na tsy izany, rehefa fantatrao izao ny soritr'aretina sy ny fitsaboana jaundice amin'ny saka dia fantatrao bebe kokoa fa afaka hikarakara tsara ny fahasalaman'ny saka anao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Saka saka » saka » aretina » Inona avy ireo soritr'aretina sy fitsaboana ny jaundice amin'ny saka?